Louisville, KY • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Aza mankaleo ao Louisville, KY. Fandriho ny otra ara-nofo nataonao.
Tanàna lehibe indrindra any Louisville ao amin'ny Commonwealth any Kentucky ary tanàna faha-29 be mponina indrindra any Etazonia. Io no iray amin'ireo tanàna roa ao Kentucky voatondro ho kilasy voalohany, ny iray kosa Lexington, tanàna faharoa lehibe indrindra an'ny fanjakana. Aza mankaleo ao Louisville, KY. Mamandrika ny fanorana ara-nofo.